3166: 3BR/2BA Ingleside Woods - I-Airbnb
3BR/2BA: Leli yiKhaya lami eliseMacon, GA lihle kakhulu endaweni yase-Ingleside Woods. Kuyindawo enhle kakhulu eseduze kakhulu ne-I-75. Leli khaya linendawo ecishe ibe ngu-1,400 sqft futhi linezitezi zokhuni oluqinile kulo lonke. Itholakala inyanga nenyanga futhi njengokuqashwa kwesikhathi eside, futhi.
Angihlali kule ndawo, kodwa nginabaphathi bendawo abazoba seduze uma kukhona okudingekayo futhi bakuhlole ukungena nokuphuma :-) Ngihlala ngitholakala ngocingo nangombhalo :-)
4.75 out of 5 stars from 27 reviews
4.75 · 27 okushiwo abanye